Ny olana dia betsaka ny miseho ho mahay saingy tsy mijoro. Ny filoham-pirenena izay lany tamin’ny fifidianana dia mampalahelo satria hita amin’ny zavatra ataony fa tsy filoham-pirenena izy fa filohana antoko. Tsy misy fandraisana andraikitra avy amin’ny CENI sy HCC. Ho avy ny fifidianana kaominaly dia mbola mampalahelo fa ny anaran’i Andry Rajoelina ihany no mipetraka eny sy eken’ny CENI. Hay ve, hoy izy, i Andry Nirina Rajoelina, ka mbola milatsaka hofidiana kaominaly rehefa avy nilatsaka ho fidiana solombavambahoaka e ? Izay rehetra ataony dia propagandy. Tsy mahagaga ahy, hoy hatrany izy, fa mbola maka ny fon’olona amin’ny Tana-masoandro eny Ambohitrimanjaka izy. Efa mba nanantena izahay ary tsy resahana intsony ny resaka hala-bato, hoy izy, satria hoe efa nahazo filoham-pirenena. Hay ity filoha ity mbola milatsaka eny amin’ny kaominina. Aminay, hoy hatrany izy, dia tsy misy antenaina amin’izao fitondrana izao.